Madaxweyne Xasan Sheekh oo la filayo inuu maanta booqasho ku tago Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la filayo inuu maanta booqasho ku tago Kismaayo
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa iney saakaa gaaraan magaalada Kismaayo ee xarrunta gobolka Jubada Hoose.
Ciidamada badan ayaa la soo sheegaya in la dhigay magaalada Kismaayo gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha kuwaasi oo amaanka sugaya, waxayna socda qaban qaabada soo dhaweyn madaxweynaha.
Sidoo kale, saaka waxaa la xiray wadada Makal Al-mukarama gaar ahaan wadada hareer marta madaxtooyada halkaasi oo ay marayaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh ee ku sii jeeda Kismaayo.
Ilo xogogaal ah ayaa sheegay in sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u aadayo Kismaayo tahay inuu maamulka Juba ku qanciyo RW cusub ee uu shalay magacaabay, kaasoo ah Cumar C/rashiid.
Waxaa horay u jiray in maamulka Juba laga ballan qaaday in xilka RW loo magacaabayo Xuseen Cabdi Xalane oo xukuumadii dhacday ka ahaa wasiirka maaliyadda, ayna isku beel yihiin madaxweynaha maamulka Juba, Axmed Madoobe.